‘मैले जुन प्रतिबद्धता जनाइरहेको छु, त्यो पुरा गरेरै छाड्छु’ : पुर्वमन्त्री राई | Chhinchhin Khabar
‘मैले जुन प्रतिबद्धता जनाइरहेको छु, त्यो पुरा गरेरै छाड्छु’ : पुर्वमन्त्री राई
१२ मंसिर २०७४, मंगलवार १०:२१
मधेस आन्दोलनको रापले स्थापित भएको तत्कालिन मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा साविक क्षेत्र नम्बर २ बाट सभासदमा निर्वाचित भएका मोहम्मद ईस्तियाक राई छोटो समय भएपनि मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्न सफल भए । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन २०७० मै पुनः सोही क्षेत्रबाट चुनाव लडेपनि उनले जित दोहोर्याउन सकेनन् । संघिय समाजवादी फोरमबाट पुर्वमन्त्री राई नयाँ संरचना अनुसार बनेको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधी सभा सदस्यका लागी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । चुनावको तयारी लगायत विविध विषयमा उनीसँग खगेन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी :-
जनताको माझमा आफ्नो एजेण्डा सहित घरदैलोमा पुग्दैछौं । मैले लगभग ७० प्रतिशत मतदाताको घरमा पुगेर घरदैलो गरिसकेको छु । गाउँको घरदैलो लगभग सकेर नगरको समेत सुरुवात गरेको छु । एक हप्ताभित्र नेपालगन्जका सम्पुर्ण वडामा घरदैलो गर्नेछु ।
आम मतदाताको मिश्रित जवाफ आइरहेको छ । तर धेरै जसो मतदाताको चासो भनेको आफ्नो पहिचान आफ्नो अधिकार, आफ्नो प्रतिनिधित्व र स्रोत, साधनमा समान पहुँच हुने की नहुने भन्ने नै निवार्चन प्रसार–प्रचारका क्रममा आम मतदाताले प्रश्न गर्ने गर्नुभएको छ । आम जनताले आफ्नो दैलोमै स्वागत गरिरहनु भएको छ । अधिकांसले जित सुनिश्चत भएको बताउनु भएको छ । यो नेपालबाट उत्पीडित बर्ग जातजाति समुदायको मुद्दा बोकेर हामीलाई पहिचान दिलाउने हाम्रो अधिकारको विषयमा बोल्ने, स्रोत साधन र न्यायमा समान पहुच पुगाउने भन्दै भोट दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।
तपाईले उमेदवारी किन दिनुभएको ?
मेरो उमेदवारी भनेको पहिलो त यो संविधान जुन छ, त्यो त्रुटीपुर्ण छ । किनकी अहिले पनि यसमा उत्पीडित बर्गको, जातजातिको स्रोत साधनको र न्यायको उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तसर्थ, संविधान संशोधन हुनै पर्छ । र यो संविधान संशोधन मार्फत बिद्यमान संविधानको मर्म अनुसार कानुन संशोधन गरी त्यसमा बर्गको आधारमा, जातिको आधारमा, भाषाको आधारमा, लिंगको आधारमा, क्षेत्रका आधारमा, पहिरन र पोषाकको आधारमा गरिने सबैखाले बिभेदको अन्य गरी एउटा समानता समृद्धि र समुन्नत नेपालको स्थापना गरी उचित न्यायको पहुँच पुर्याउनु नै मुख्य हो ।
निर्वाचनका लागी तपाईको प्रतिबद्धता के हो ?
मलाई जहाँसम्म लागेको छ, सबैले विकास–विकास भनिरहेका छन् । तर, मैले के भन्छु भने अहिले नेपालमा विकास जुन मुद्दा छ, त्यो विकास पुग्ने कसरी त्यता कसैले ध्यान दिएका छैनन् । मैले विकास पुगाउने माध्यमको पहिचान गरेको छु । विगतको संविधानले पनि कसैलाई काखा र पाखा गरेको थिएन् । तरपनि, के थियो भन्दा एउटा क्षेत्रको विकास हुन्थ्यो एउटा जाति, पहिरन, भाषाको विकास हुन्थ्यो, तर समग्र क्षेत्रको विकास त्यसरी सम्भव भएन र हुनपनि सकेन् । तसर्थ, हाम्रो प्रमुख एजेन्डा के–हो भन्दा यो संविधान र अब बन्ने नयाँ कानुनमार्फत प्रत्येक नागरिकको समान पहुँच हुने गरेर स्रोत साधनमा पनि समान अवसर पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदछु । नेपालगन्जकै विकासको कुरा गर्ने हो, भने जुन राजनीतिक दलले अहिले सम्म नेतृत्व गरे उनीहरुले नै भेद्भाव पुर्ण तरिकाले विकास गरे नेपालगन्जको । नेपालगन्जमा नयाँ-नयाँ बस्तीलाई विकास गरे । तर, यहाँका मुल रैथाने जो की नेपालगन्ज बसाउन मुख्य योगदान पुर्याए । त्यो क्षेत्रका जनताहरु अहिले पनि नालामा दुर्गन्ध सुघेर बस्न बाध्य छन् । जुन नेपालगन्जको पुरानो क्षेत्र थियो, त्यो कसैले विकास गरेनन् । नेपालगन्जको पहिचान मास्ने काम भइरहेकाले त्यो पहिचान अब मैले जगाउँछु, त्यो क्षेत्रको विकास मैले गर्नेछु । नेपालगन्जको विकासको लागी मैले विशेष पहल गर्नेछु । अन्य उमेदवारले आफुले काम गर्न नसक्ने जस्ता कुरापनि प्रतिवद्धता जनाउँदै आउनु भएको छ । तर म त्यस्तो छैन, जनताले मलाई विश्वास गरेका छन् । मैले नै नेपालगन्जको मुहार फेर्नेछु । नेपालगन्ज नेपालकै एक प्रमुख शहर हो । जो पाँच प्रमुख शहर मध्ये एकमा पर्छ, तर बजेट बाडफाँटमा अहिले नेपालगन्ज पछिको शहर बन्दै गएको छ । म तीन महिने मन्त्रि हुदाँपनि नेपालगन्जको लागी टप पाँच शहरलाई जाने बजेट भित्र्याएको थिए ।
यदी तपाई निर्वाचित हुनुभयो, भने नेपालगन्जमा के-के कुरामा परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ ?
अब नेपालगन्जको परिवर्तनको कुरा गर्ने हो, भने एक नम्बरमा यो नेपालगन्जलाई नेपालकै एउटा पुरानो शहरमध्ये टप पाँचमा पर्न जान्छ । यसलाई एउटा एन्टीक शहरका रुपमा विकशित गराउने योजना बनाएको छु । दोस्रो नम्बरमा नेपालगन्जको विकास हुने रोजगारीको सिर्जना हुने होटल व्यवसाय देखी अन्य व्यवसाय चल्ने माध्यम एक अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण गर्नु हो । अर्को विश्वविद्यालय, प्रादेशिक अस्पतालका साथै नेपालगन्जमा रहेको मुस्लिम समुदायमा पर्दा पछाडी बस्ने लाज मान्ने, छोरीहरु बालिक हुँदा पढाउन बन्द गर्ने बाध्यता छ । त्यो अन्य गर्ने गरी मुस्लिम बिश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना छ । नेपालगन्जमै सँस्कृत, हिन्दी, अवधी पढ्नेका लागी पनि बिद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने मेरो योजना छ । नेपालगन्जलाई शुन्दर बनाउन चक्रपथ निर्माण गर्ने गरी काम गर्ने उद्देश्य राखेको छु । अहिले सम्म अन्य उमेदवारले जितेपनि आश्वासन राखेका छन् । त्यो उनीहरुको हैसियत भन्दामाथि छ । मैले जुन प्रतिबद्धता जनाइरहेको छु, त्यो पुरा गरेरै छाड्छु त्यसको लागी एक पटक मलाई जनताले विश्वास गरेर भोट दिनै पर्छ । मैले प्रतिनिधी सभामा जित हासिल गरे, भने म मन्त्री बन्ने प्रचुर सम्भावना छ र मन्त्री भईहाले भने विकास निमार्ण त यही स्थानमा हो मैले गर्ने ।
चुनावका बेला बोलेका प्रतिवद्धतालाई जितेर गएपछि नेताहरुले बिर्सन्छन् भन्ने आरोप छ नि ?
सही हो प्रतिबद्धता पनि यति हुन्छ, कि त्यो पुरा गर्न सक्ने आधार हुदैन । तर, म के भन्छु भने शत प्रतिशत मैले आधारहरु जनतालाई प्रस्ट पारेको छु कि मैले जुन प्रतिबद्धता गरेको छु सोही अनुसार काम पनि पुरा गरेरै छाड्नेछु । जनताले लेखेर राख्दा हुन्छ । म जितेर गएको पाँच बर्ष पछि पुनः यही प्रश्न गर्न पाउनुहुने छैन । किनकी मैले जुन प्रतिबद्धता जनाएको छु, त्यो पाँच बर्षसम्म पुरा गरिसकेको हुनेछु ।
तपाईको प्रतिस्प्रद्धि दल/उमेदवार को हो ?
मेरो प्रतिस्पर्धा कोही पनि छैन । म एक्लो उमेदवार हुँ । मलाई नै जनताले अत्यधिक मत दिएर विजय बनाउने छन् । म पहिले पनि नेपालमै तेस्रो स्थानमा थिए, बढी मत ल्याएर जित्नेमा । यो पटक पनि जनताले मलाई त्यसैगरी जिताउने छन् । एउटा पहिचानको पक्षमा म जुन अडिक भएर लागेको छु, मलाई पुर्ण विश्वास छ । मै जित्छु मेरा कोही प्रतिस्पर्धी छैनन् । देशभर मलाई नै बढी मत दिएर एक नम्बरमा जनताले जिताउँदै छन् ।
म आम मतदातालाई यही भन्छु कि संघियता, लोकतन्त्र, पहिचान, समृद्धि, समानता, विकास, न्यायको समान पहुँच, आर्थिक स्रोत साधनमा समान पहुँचका निम्ति र जोस जाँगर भएका युवा सबै आम मतदातालाई मेरो अपिल छ । मसाल चुनाव चिन्हमा आफ्नो अमुल्य मत दिनुहोला । तपाईहरुको मतको कदर गर्नेछु । आम मतदाताको आशालाई निराशामा बदल्न दिने छैन ।
Previous articleखत्री, गौडेल र बर्मा घरदैलोमा सक्रिय, मतदाता उत्साहित बन्दै
Next articleडुबान समस्यालाई उच्च प्राथमिकता दिने हमालको प्रतिवद्धता
कब्जामा लिइएका भारतीय वायु सेनाका पाइलट पाकिस्तानले फिर्ता गर्ने
आगजनी घटनाको गम्भिर अनुसन्धान गर्न पत्रकारको दवाव
चिनियाँ राष्ट्रपति सी राजकीय भ्रमणका लागि काठमाडौंमा